डाक्टर पढ्न कर्णाली आउनुस् – Health Post Nepal
२०७७ चैत ९ गते १८:३५
एक दशकअघि कर्णालीका अस्पतालमा चिकित्सक भेटिने गरेका थिएनन्। कुनै घटनाको शव परीक्षण गर्न हप्ता दिन कुर्नुपर्ने अवस्था थियो। दुर्गमले परिचित कर्णाली अहिले चिकित्सा शिक्षा ‘डाक्टर’ पठाउने भएको छ।
काठमाडौंको आँखाले कर्णाली दुर्गम भनिथ्यो र कर्णालीमा चिकित्सकदेखि कर्मचारी आउने मान्दैन थिए। सरकारले कर्मचारीले कर्णालीमा सरुवा गरेपछि कारवाही गरेको सम्झने र आफूलाई हिनताबोध गर्ने गरेका थिए।
भक्तपुरका डा. रहिस कोजु जनरल ‘प्राक्टिस इमरजेन्सी मेडिसन’ पढ्न कर्णाली पुगेका छन्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पहिलो वर्षदेखि पढाउन शुरु गरेको स्नातकोत्तर तहको डाक्टरी पढ्न जुम्ला पुगेका हुन्।
उनी छात्रवृत्तिमा कर्णालीमा आएर पढ्न थालेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहको पढाइका लागि पाँच कोटा दिएपछि गत चैत १ गतेदेखि पठनपाठन शुरु भएको भइरहेको हो।
महङ्गो शुल्क तिरेर सुविधा सम्पन्न ठाउँमा गएर चिकित्सा शिक्षा पढ्नुपर्ने कर्णालीको बाध्यता थियो। सो बाध्यता अब हटयो। अब कर्णालीले चिकित्सक उत्पादन गरेर नेपालभर पठाउन सक्ने अवस्था रह्यो । यो कर्णालीको सुखद पक्ष हो। कर्णालीमै चिकित्सक पढाइ हुन थालेपछि कर्णालीका बासिन्दा निकै उत्साहित छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘जनरल प्राक्टिस इमरजेन्सी मेडिसन’मा तीन, एनएसथेसिया एक क्रिटिकल केयरमा एक र पिडाट्रिक्समा एक पढ्न पाउने गरी कोटा पठाएको थियो। तीमध्ये अहिले जनरल प्राक्टिसमा दुई र एनएसथेसिया पढ्न एक भर्ना भएका छन्।
यी सबै विषयमा पठनपाठन हुने प्रतिष्ठानले जनाएको छ। कपिलवस्तुका डा. बेदकुमार चौधरी कर्णालीमा स्नातकोत्तर तहको डक्टरी पढ्न पाउँदा निकै खुशी छन्।
‘कर्णालीमा पहिलो ब्याज पढाइ हुन थालेको हो। यो ब्याज निकै राम्रो हुनेछ। सुगमबाट दुर्गम कर्णालीको स्वास्थ्य अवस्था हेर्दा निकै कहालीलाग्दो देखिन्छ। कर्णालीले डक्टरी पढाउन थालिसक्यो। कर्णालीमा पढेर कर्णालीमै स्वास्थ्य सेवा दिने धोको छ’ उनले भने।
‘हामी कर्णालीमै पढ्छौँ। अवसर पाएसम्म कार्यक्षेत्र पनि कर्णालीमै बनाउने छौँ। कर्णालीवासीको स्वास्थ्य सेवा गुणस्तरीय बनाउन लागिपर्ने छौँ’ उनले भने। प्रतिष्ठानले बासको व्यवस्था गरेको छ। डा ललितसिंह धाँमी दार्चुलादेखि कर्णालीमा पढ्न आएका छन्। उनीहरु कर्णालीमै डक्टरी पढ्न पाउँदा खुशी छन्।
‘कर्णाली स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा र अनुसन्धानका हिसाबले निकै अगाडि बढ्नेछ”, स्नातकोत्तर तहको डक्टरी पढाइ तीन वर्षको हुनेछ।
तत्कालीन कर्णाली अस्पतालबाट सेवा शुरु भएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान क्लिनिकल सेवा हुँदै अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रका रुपमा ठूलो फड्को मारिसकेको छ। स्नातकतहको डक्टरी पढाई कर्णालीको विकासको कोसेढुङ्गा भएको प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष डा निरेश थापाले जानकारी दिए।
‘कर्णालीमा डाक्टर बस्न मान्दैनन्। डाक्टर नहुँदा कर्णालीवासी मृत्यु पर्खेर बसिराखेका छन् भन्ने सुनिन्थ्यो। अहिले कर्णाली डाक्टर उत्पादन गर्ने कारखाना बन्दैछ। रोजेर कर्णालीावासीले उपचार सेवा पाउँदैछन्। स्वास्थ्य शिक्षा हासिल गर्न कर्णालीमै पाएका छन्’ उनले भने, ‘अहिले पाँच सिट पाएका छौँ। आगामी वर्षमा १० देखि १५ विद्यार्थीसम्म भर्ना लिनसक्ने अवस्थामा पुग्ने छौँ,’ उनले भने।
उनले स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य शिक्षा र अनुसन्धान प्राथमिकतामा राखेर स्वास्थ्य शिक्षाका कार्यक्रम भइरहेको बताए। दुरदराजमा स्वास्थ्य सेवा दिने र सामाजिकरुपमा उत्तरदायी डक्टर उत्पादन गर्ने लक्ष्य प्रतिष्ठानको छ। यहाँ उत्पादित डक्टरले जस्तोसुकै दुर्गम क्षेत्रमा पनि सहजैरुपमा काम गर्न सक्नेछन्।
अब बिरामी डाक्टर खोज्दै आउने होइन। डाक्टर बिरामी खोज्दै जाने र व्यावसायिक मर्यादालाई पालना गर्ने जनशक्ति उत्पादन हुनेछ। यहाँ उत्पादिन जनशक्तिले जुनसुकै दुर्गम क्षेत्रमा पनि सहजैरुपमा काम गर्न सक्नेछ। कर्णाली प्रतिष्ठानले पाठ्यक्रम विद्यार्थी केन्द्रित बनाएको छ।
बिरामी र डक्टरका सम्बन्ध घनिष्ट हुनेछ। पढ्दै बिरामीको सेवा गर्नेछन्। कर्णाली प्रदेशका सांसद दिनबन्धु श्रेष्ठले कर्णालीमा डक्टरीको पठनपाठन हुनु निकै सुनौलो र ऐतिहासिक कार्य भएको बताए। डक्टर पढ्न लाखौँ खर्च गरेर अनेत्र जिल्लामा जानुपर्ने अवस्था थियो।
शव परीक्षण गर्न सुर्खेत, नेपालगञ्ज जानुपथ्यो। अब कर्णालीमै डक्टरी पढाइ हुनु सुखद क्षण हो। ‘यहाँ उत्पादित जनशक्तिलाई दक्ष र सक्षम बनाउँदै सबै प्रतिष्ठानभन्दा नमूना बनाउनुपर्छ। जागिर खान दुर्गम जादैन भन्ने मान्यता हटेको छ। अब दक्ष डक्टर बन्न कर्णालीमा जानुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ’ उनले भने।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भूपेन्द्र थापाले कर्णालीबाट गुणस्तरीय जनशक्ति र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध हुने बताए।प्रतिष्ठानका लागि यो आफैँ परीक्षणकाल हो। क्वालिटी सर्भिस दिनसक्नुपर्छ। जिम्मेवार र फराकिलो सोचले शैक्षिक क्षेत्रलाई अघि बढाउनुपर्छ।
‘अध्ययन र अनुसन्धानलाई सँगसँगै लैजानुपर्छ। अबको जनशक्ति सेवामुखी हुनेछ। बिरामी डाक्टर कहाँ होइन। डाक्टर बिरामी कहाँ पुग्नुपर्नेछ। सेवा भावको हिसाबले जुट्नुपर्छ। पदाधिकारी अधिकांश समय जुम्लामै बस्नुपर्छ’ उनले भने।
‘कर्णाली अभाव, अशिक्षा, रोग र भोकको मात्र प्रयाय बनिरह्यो। राज्यमा बस्नेले कर्णालीले हेर्ने नजर कहिले फेरिएन। तर पछिल्लो समयमा कर्णाली प्रतिष्ठानमा भइरहेको क्रियाकलापले निकै राम्रो सन्देश दिएको छ।
अब कर्णालीको युवा जनशक्ति डक्टरी पढ्न बाहिर जाने छैन। कर्णालीमै सस्तो र सुलभरुपमा स्वास्थ्य शिक्षा हासिल गर्नेछ। यो खुशीको विषय हो,’ उनले भने। रासस
Tags: कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, स्नातकोत्तर तह